माधव नेपाल नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा!!!! | नेपाल इटाली डट कम
माधव नेपाल नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा!!!!
व्यवस्थापिका संविधानसभाको आज बसेको बैठकले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई निर्विरोध रुपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको छ। उहाँलाई सभामुख सुवास नेम्बाङले ६ बजेर २४ मिनेट जाँदा प्रधानमन्त्रीका लागि एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएकाले नेपाललाई निर्विरोध रुपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । संविधानसभामा रहेका २२ दलको समर्थनमा नेता नेपाल प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका हुन् । संविधानसभामा रहेका २४ दलमध्ये २२ दलको समर्थन रहेको छ व्यवस्थापिका संसदको सनिबारको बैठकमा नेपाली काग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित २ स्वतन्त्र सभासद् २२ दलका प्रतिनिधिको समर्थन छ । व्यवस्थापिका संसदको बैठक सुरु हुनासाथ माओवादी, नेकपा एकिकृत र नेपाली जनता दलका सभासद्हरुले आ-आफ्नो धारणा राखेर निर्वाचन प्रकृयाबाट बाहिरिएका थिए । माओवादी र नेकपा एकिकृतका सभासद्ले सदन बहिस्कार गरे पनि जनता दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक सभासद्ले भने एमाले नेता नेपाललाई समर्थन रहेको जनाउदै बैठक बहिस्कार गरेनन् ।
बैठकमा माओवादी संविधानसभा दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृयालाई एनेकपा माओवादीले बहिस्कार गरेको घोषणा गरे । एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गठनका लागि भएको निर्वाचन प्रकृयालाई माओवादीले बहिस्कार गरेको हो । बैठकमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित रहे । माओवादी संविधानसभा दलका उपनेता श्रेष्ठले सैनिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै गठन भएको सरकारलाइ माओवादीको समर्थन नरहने बताए । विस्तारबादी शक्तिको निर्देशनमा बनेको सरकारको कुनै भरोसा नभएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रस्ताव राख्ने क्रममा प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारबाट बाहिरिए पनि माओवादीका लागि ढोका खुल्ला भएको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको बैठकका उनले प्रचण्डले माधव नेपाललाई हारेको व्यक्ति भनेर गरेको सम्बोधनप्रति दुःख व्यक्त गरे । माधवजी त निमित्तमात्र हो, सहमति, सहकार्य र एकतामा कोही पनि हार्दैन उनले भने । उनले सहमति, सहकार्य र एकताकै बाटोबाट अगाडि जानु पर्ने बताए । उनले एमाले नेता माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्दै आफू पनि उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा रहने बताए ।
सभापति कोइरालाले राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप र सहमतिबाट अघि बढेर शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे । सभापति कोईरालाले शान्ति प्रकृयामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि ठूलो योगदान रहेको बताउँदै निष्कर्षमा पुग्ने बेलामा बाहिरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले इतिहासमा प्रचण्डको नाम रहने बेलामा किन पछाडि सरेका हुन् आफूले नबुझेको उल्लेख गर्दै आफूले प्रचण्डको कुरा पछिल्ला दिनमा नबुझेको समेत बताए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीसहित तीन दलले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिस्कार गरे पनि सदन सुचारु हुने वातावरण बनाएर सरकार निर्माण प्रकृयामा सहयोग गरेको बताए ।
मधेशी जनाधिकार फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले एमाले र कांग्रेसले सयुक्त मधेशी मोर्चाको प्रस्तावमा सहमतिपछि समर्थन गरिएको बताए । माओवादी सभासद् एवम् माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायाणकाजी श्रेष्ठले माओवादीले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रकृयाको मात्र विरोध गरेको तर संसदको बहिस्कार नगरेको स्पस्ट पारेका छन् ।
नेकपा एकीकृतका सभासद् परि थापाले अहिलेको सरकार गठन प्रकृयालाई प्रोक्सी मदर को संज्ञा दिए । राष्ट्रपतिलाई उकास्नु गलत भएको उनको भनाई थियो । एकीकृतले पनि बहिस्कार नगरे पनि संसदमा नबसेर वाक आउट गरेको घोषणा गरे । नेपाली जनता दलकी सभासद् गायत्री साहले पनि राष्ट्रपतिले कदम फिर्ता लिनु पर्ने माग गरिन । उनले आफ्नो पार्टीले नया प्रधानमन्त्री गठन प्रकृयालाई कुनै समर्थन नगरेको स्पष्ट पारिन । उनले पनि बहिस्कारको घोषणा गरिन ।
कांग्रेस सभापति कोइरालाले एमाले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गरियोस भनि प्रस्ताव गरेपछि अन्य दलका नेताहरुले समर्थन गरेका थिए । समर्थन गर्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीले निर्वाचन प्रकृया बहिस्कार गरेपनि उहाँहरुले सहयोग गरेको धारणा राखे ।
सदरुल मिया हक
नेपालका पक्षमा रहेका दल र सभासद्हरु
नेपाली कांग्रेसः ११३
नेकपा एमालेः १०९
मधेशि जनअधिकार फोरमः ५३
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीः २१
नेपाल सदभावना पार्टीः ९
नेकपा -माले)ः ९
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीः ८
नेकपा संयुक्तः ५
राष्ट्रिय जनमोर्चाः ४
राप्रपा नेपालः ४
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीः ३
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीः २
संघिय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्चः २
सद्भावना -आ)ः २
नेपाली जनता दल ः १ -विश्वनाथ अग्रवाल)
समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालः १
चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीः १
नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल१
नेपाः राष्ट्रिय पार्टीः १
नेपाल परिवार दलः १
दलित जनजाति पार्टीः १
विपक्षमा भएका दलहरु
एकीकृत नेकपा माओवादीः २३८
नेकपा एकीकृतः २
नेपाली जनता दल ः १-गायत्री शाह)
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल: एक झलक
व्यवस्थापिका संसदको शनिबारको बैठकबाट निर्विरोध निर्वाचित प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल २००९ फागुन २३ रौतहटको गौर- ३ मा जन्मिएका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसदको शनिबारको बैठकबाट निर्विरोध निर्वाचित प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल २००९ फागुन २३ रौतहटको गौर- ३ मा जन्मिएका हुन् । माता दुर्गादेवी उपाध्याय र पिता मंगलकुमार उपाध्यायको कोखबाट जन्मिएका नेपाल निम्न पूँजीपति वर्गको परिवार हुन् ।
रौतहटको गौरमा जन्मिएका नेपालले बिकमसम्मको अध्ययन गरेका छन् । २०२६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका नेपालका भूमिगत बेलाका नामहरु सुवोध सुनिल, रन्जन र वि.के के हुन । २०२६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (पुष्पलाल) समूहबाट राजनीति सुरु गरेका नेपाल २०३५ सालमा नेकपा मालेको संस्थापक तथा पोलिट्ब्युरो सदस्यमा चयन भए ।
उनी २०२७-२०३० सम्म तत्कालीन नेपाल क्रान्तिकारी संगठन मालेको जिल्ला सदस्य र २०३२ जेष्ठ २४-२५ मा विराटनगरमा गठित अखिल नेपाल कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेशन कमिटी(माले) को ब्यूरो सदस्य निर्वाचित भएकोमा २०३३ सालमा राजकाज अपराधमा पक्राउ परी २ वर्ष बन्दी बनाइए । रौतहटबाटै शिक्षा शुरु गरेका नेपालले २०३० सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरेका हुन् । २०३५ सालमा नेपाल नेकपा मालेको संस्थापक पोलिटब्यूरो सदस्यमा निर्वाचित भई २०४६ को चोथौ महाधिवेशनपछि पनि त्यही पदमा बहाल रहँदै २०४६-४७ को संयुक्त जनआन्दोलनको क्रममा गठित संयुक्त जनआन्दोलन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य रहे ।
२०४७ मा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य निर्वाचित नेपाल २०४८ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य र २०४९ सालमा पाचौ एमालेको महाधिवेशनले पुन पोलिटब्यूरोमा पुनः निर्वाचित गरेको थियो । उनी २०५० जेष्ठ ३ गते मोटर दुर्घटनामा परी तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको निधन पश्चात पार्टी महासचिवमा निर्वाचित भए । २०५१ को महाधिवेशन निर्वाचनमा रौतहट १ र ४ बाट प्रतिनिधिसभामा निवार्ाचित नेपाल सोही वर्ष बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारमा उपप्रधान एवं परराष्ट र रक्षा मन्त्रीसमेत बने ।
२०५४ को छैटो र २०५९ को सातौ महाधिवेशनबाट फेरि महासचिवमा निर्वाचित भई लगातार एमालेको सर्वोच्च नेतृत्व सम्हाले । २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं २ र रौतहट ६ गरि २ ठाउबाट पराजीत भएपछि २०६५ वैशाखमा नेपालले एमालेको महासचिव पदवाट राजीनामा दिएका थिए । फागुनमा सम्पन्न एमालेको आठौ महाधिवेशनपछि नेता नेपाल एमालेको वरिष्ठ नेता चुनिए ।
संविधानसभा निर्वाचनमा भने नेपाल काठमाण्डौ २ र रौतहट ६ मा पराजीत भए । २०४७ सालमा संविधान सुझाव आयोगको सदस्य रहेका नेपाल, २०५१ उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा र परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हाले ।
उनले भारत, चीन, अमेरिका, उत्तर कोरिया, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, बेलायत, बेल्जियम, निदरल्यान्ड्स, लगायत तीन दर्जन बढि मुलुकको भ्रमण गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुअघि संविधानसभाको महत्वपूर्ण संवैधानिक समितिको सभापति रहेका नेपालका एक छोरा र एक छोरी छन् । उनकी श्रीमती गायत्री नेपाल सरकारी सेवा राष्ट्र बैंकमा जागीरे छिन् ।
« माधव नेपाल निर्विरोध प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका बैठक जारी – LIVE
नयां सरकारमा मन्त्री बन्ने अनुहारहरु »